I-Ploce, i-Bacina: Iflethi okanye indlu ekwicomplex i-Marra kufuphi nolwandle - I-Airbnb
I-Ploce, i-Bacina: Iflethi okanye indlu ekwicomplex i-Marra kufuphi nolwandle
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yabantu abayi-2 ikwiimitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni, inetreyini okanye ibhalkhoni. Jonga kwi-peninsula yasePeljesac kunye neenduli ezijikelezileyo. Umzila wokuhamba nebhayisekile kufutshane. Umbindi wedolophu unokufikelelwa ngeenyawo ngaselunxwemeni (imizuzu eyi-20). Ivenkile encinci kunye nebhari yekofu elunxwemeni. Ungakwazi ukulungiselela uhambo ngesikhephe, ukuqesha i-UP (i-paddle surf). Kufuphi namalwandle anesanti eNeretva delta kunye ne-kiteing. Iindawo ezikufutshane (iDubrovnik, iSplit, iMostar, iMengerugorje, iPeljesac, iKorcula...)
Kumgangatho wokuqala kwindlu enkulu kukho iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-2 nombuki zindwendwe. Kwisitudiyo kukho ibhedi enkulu, iitafile ezisecaleni kwebhedi, iwardrobe, ikhitshi, ibhokisi yoncedo lokuqala negumbi lokuhlambela elineshawa. Yonke into intsha kwaye ikhethwe ngononophelo. Isitudiyo sinefenitshala yokuhlala. Amathuba okusebenzisa igrili eqhelekileyo.
I-Baćina ikwiindawo ezimbini. Elinye lingamachibi aseBaćinska ibe elinye liselunxwemeni. Siselunxwemeni lolwandle, 200m ukunyuka ukusuka kunxweme lokuqala oluphakamileyo. Ecaleni kolwandle kukho ikhefi kunye nevenkile encinci, kwaye indawo esedolophini iyi-1.5km yeendawo eziphambili ngaselwandle. Kule ndlela kukho ulwandle olutsha olumangalisayo olunomthunzi kunye nendawo yokupaka.